IGranary kwiFama yaseBridge
IGranary luguqulo olutsha kraca, igcina iimpawu zeshedi yokuqala, ngelixa ibonelela ngendawo yokuhlala yangoku, elula kunye nenomoya ukuhlalisa lonke usapho kwindawo entle yaseShropshire yasemaphandleni. Ifakwe ngaphakathi kumhlaba weFama yeBridge, iGranary ineembono ezintle, sisiseko esifanelekileyo sokufumanisa indawo ngemoto, ngeenyawo, okanye ibhayisekile.
IGranary ixhotyiswe ngokupheleleyo ngayo yonke into onokuyidinga kwindawo yokuhlala usapho, ikhitshi eliphangaleleyo, indawo yokutyela, igumbi lokuhlala, amagumbi okulala kunye negumbi lokuhlambela.
IGranary ibonelela ngendawo yanamhlanje ethandekayo ebandakanya ikhitshi elikhulu losapho kunye negumbi lokutyela elinendawo yokuhlala ejonge ngaphandle kwintendelezo.
Amagumbi okulala amathathu aneen-suite. Amagumbi amabini aphindwe kabini kumgangatho wokuqala onamagumbi okunxiba kunye negumbi elinye lamawele, eli kumgangatho osezantsi kunye negumbi lokuhlambela elifikelelekayo kunye nendawo eninzi.
Kukho indawo yokuhlala ephangaleleyo, kodwa epholileyo, enomlilo ovuthayo.
Isixhobo esigcweleyo/igumbi le-boot.
Indawo eninzi yokupaka kunye nendawo engaphandle inentendelezo eneembono kwi-oki enkulu.
Siyazithanda izilwanyana zasekhaya (ubuninzi bezinja ezi-2 ngokuhlala) kodwa sicele ukuba izinja zigcinwe kwindawo ekhokelayo xa zingena okanye ziphuma efama, zihlale kumgangatho osezantsi eGranary kwaye musa ukutsiba/uhlale/ungqengqe phezu kwefenitshala.
Sikwacela ukuba izinja zingashiywa zingajongwanga ngaphakathi ngelixa iindwendwe ziphuma nangaphandle kwindawo yepatio yeGranary nangaliphi na ixesha, iindwendwe ziyacelwa ukuba zingavumeli izinja zabo ukuba zitsibe iingcango zepatio yeglasi xa zingaphandle.
Senza nentlawulo encinci eyongezelelweyo ye-£ 20 ngokuhlala ngokucocwa ukuze kulungiswe xa sifika.
Sihlala kwi site kodwa sobabini siyasebenza, I will be available via message if andikho around. Ndihlala ndijonge ukudibana neendwendwe xa ndifika, kodwa ukuba oku akunakwenzeka, ndiza kunika iinkcukacha zokuzihlola ngomhla wokufika.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$338